အော် အကိုရယ်... သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ အလုပ်တခုမှာ ဒီလိုမျိုးပေးဆပ်နေရတာ တော်သေးတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ လောလောဆယ် (ဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့ အာပလာ)ကျောင်းသားဘဝမှာ တနေ့တနေ့ အချိန်တွေကုန်နေတယ်။ ဘာမှတိုးတက်မလာသေးပါဘူး။ အင်း... ဘာလို့များ အလုပ်နဲ့နီးတဲ့ နေရာမှာ ငှားမနေတာလဲဗျာ။ သူများသာ ပြောနေတာပါ. ကျနော်လဲ အခြေအနေအရပါပဲ
My web-site :: http://technocracy.ideas2Ignite.com
Stop by my webpage http://tktutor.com/sns/blog/view/172836/spanish-property-market-in-2011-great-or-bad
my web-site; http://www.penpalspoint.com/
Here is my web page - animationforafrica.com
Here is my web site ... Olo.ru
Here is my web blog disciplesconnections.com
I discovered your blog web site on google and check justafew of your early
posts. Continue to maintain up the very good operate. I simply additional up your RSS feed to my MSN News
My weblog ... http://test.tviou.com/blog/45612/hiring-a-car-to-sight-see-spain/
Also visit my site - orihuela periodico